Pride Aqoonsiga Sumaddiisu - Joornaalka Naqshadeynta
Aqoonsiga Sumaddiisu Si loo abuuro qaabeynta astaanta astaanta, kooxdu waxay u adeegsatay daraasadda bartilmaameedka bartilmaameedka dhowr siyaabood. Markay kooxdu sameysay qaabeynta astaanta iyo aqoonsiga shirkadeed, waxay tixgalisay xeerarka cilmu-nafsiga - saameynta qaababka joomatari ee noocyada cilmi nafsiga qaarkood ee dadka iyo doorashada. Sidoo kale, naqshaddu waxay ahayd inay ku keento caadifado gaar ah dhagaystayaasha dhexdooda. Si loo gaaro natiijada la rabay, kooxdu waxay adeegsatay qawaaniinta saameynta midabka qofka. guud ahaan, natiijada waxay saameyn ku yeelatay qaabeynta dhammaan alaabooyinka shirkadda.
Magaca mashruuca : Pride, Magaca naqshadeeyayaasha : Oleksii Chernov, Magaca macmiilka : PRIDE.
Aqoonsiga Sumaddiisu Oleksii Chernov Pride